B Radio Faniry
C Radio Hafaliana
D Radio JRDB
F Radio Diocèse
H Radio Diocèse
I Radio Fafy
L Radio Belo
M Radio Zarasoa
N Radio Haja
O Radio Fanasina
P Radio Diocèse
Q Radio Aina
R Radio Tsiry
S Radio Rakama
T Radio Diocèse
V Radio Mazava
W Radio Diocèse
Y Radio Lafa
Ny Tetikasan'ny Fivondronan'ny Eveka
Vao nanomboka nandeha kelikely ny Radio Don Bosco, teo anivon'ireo Radio tsy miankina voalohany, dia niangavian'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara izy, tamin'ny alàlan'i monseigneur Philibert Randriambololona filohan'ny Vaomiera momba ny Serasera, mba hanao vinam-panorenana Radios Katôlika manerana an'i madagasikara sy hampifandray azireo. Io fangatahana io no niteraka ny "Projet Re-Sat", novolavolain'i Mômpera Cosimo Alvati izay talen'ny Radio Don Bosco tamin'izay fotoana izay. Nanampy azy i Mômpera Rosario Salerno, niandraikitra ny fanofanana ny olona. Ny tanjona dia ny hanànan'ireo Diôsezy 21 eto Madagasikara Radio Katôlika tsirairay avy, ary hampifandraisana azireo amin'ny zanabolana hahafahany mandray fandaharana avy amin'ny Radio Don Bosco.
Distribution Re-Sat à Madagascar
Dingana fametrahana ny ReSat
Niambaratonga maromaro ny fanatanterahana ny tetikasa:
Fitadiavana ireo olona hiasa ao amin'ny Radios no dingana voalohany. Nanomboka ny taona 2003 dia nikarakara fiofanana tao Ivato izay misy ny foibeny ny Radio Don Bosco mba hanofana mpiasa amina Radio: Tale, Mpanao Gazety, Teknisianina, Mpanentana. An-jatony ireo tanora nifanerasera tao amin'ny ReSat nandritra ny roa taona... hatramin'ny taona 2005.
Ny dingana faharoa kosa dia ny fametrahana ny Radio. Raha vao tonga ireo fitaovana ka vita fitsirihana dia notsinjaraina sy napetraka ary nampandehanina (Fampielezam-peo; studios; fifandraisana amin'ny zanabolana)..
Fanokafana amin'ny fomba ôfisialy sy Fitokànana ny dingana fahatelo.
16 ireo Radios Diôsezianina mandeha ankehitriny manerana an'i Madagasikara. Ankoatra ny fandaharana vokariny eo an-toerana izay manan-danja tokoa ho an'ny mpihaino dia mandray ny fandaharan'ny RDB izireo, ka araka ny mahamety azy dia alefany avy hatrany na amin'ny fotoana tiany. Araka izany, ireo fandaharana manabe sy miresaka fampivoarana ary ny momba ny fivavahana dia mety ho heno any amin'ny toerana maro manerana ny Nosy. Vinavinàina ho manodidina ny 3 000 000 ny mpihaino mety handre ireo fandaharana raha mahaliana ny faritra rehetra izy.
Na eo aza ireo zava-manahirana isankarazany ara-teknika na ara-taratasy, dia mandroso ary mahavelom-panantenana sady fakan-tahaka hatrany Afrika ny Tetikasa.